Sidee dib loogula soo noqdaa boodhadhka Mac | Waxaan ka socdaa mac
Xaqiiqdii waad isticmaashay sabuurad ku jirta Mac-gaaga in ka badan hal munaasabad. Adigana adigoon ogeyn. Waad isticmaaleysaa markasta oo aad "nuqul / dhejisid". Qoraalkaas, tusaale ahaan, waxaa si ku meelgaar ah loogu keydiyaa sabuuradda Mac si loogu dhajiyo daaqad kale ama xitaa aaladda iOS haddii aad dhaqaajiso sabuurad caalami ah.
Si kastaba ha noqotee, aad ayey macquul u tahay in adeegsi badan ka dib iyo suurtagalnimo burbur, markii la koobiyeeynayo oo la dhajinayo waxyaabaha ku jira, amarradu ma shaqeeyaan. Waxaa la joogaa waqtigii dib loo bilaabi lahaa kombuyuutarkaaga oo loo arki lahaa in wax waliba caadi ku soo noqdeen. Laakiin haddii aadan xiiseyneyn inaad dib u bilowdo Mac-gaaga, waa inaad ogaataa inaad leedahay dhowr dariiqo oo aad ku heli karto dib u bilaw kabadhka Mac. Waxaan kuu sheegeynaa waxay yihiin:
1 Dib u bilaabi Kabadhka Mac-ka adoo adeegsanaya Kormeerka Waxqabadka
2 Dib ugu bilow Koodhka Mac-ka ee Terminal-ka
Dib u bilaabi Kabadhka Mac-ka adoo adeegsanaya Kormeerka Waxqabadka
Xulashada ugu horeysa ee aan ku siineyno waa inaad isticmaasho Monitoring Activity oo aad ka heli doonto Mac kasta. Halkee ayuu ku yaal? Si fudud: Finder> Codsiyada> Adeegyada. Gudaha galkaan waxaad ka heli doontaa Kormeerka Waxqabadka. Ma rabtaa waddo xitaa dhakhso badan? Adeegso Tooska: ugu wac booska Cmd + kuna qor khaanadda raadinta "Waxqabadka Kormeerka". Guji xulashada koowaad.
Mar haddii hawlqabadka kormeeraha, sanduuqa raadinta ee midigta kore, ku qor ereyga "pboard." Waxay soo celin doontaa hal natiijo. Calaamadee oo ku riix batoonka «X» in aad ku hayso qaybta bidix ee kore ee barnaamijka. Waxay ku weydiin doontaa inaad rabto inaad hubiso inaad xireyso hawshaas. Waa inaad riixdaa «Force bixida». Koodh-boodhka ayaa dib loo bilaabi doonaa waana hubaal in la xallin doono dhibaatada nuqul / dhejiska.
Dib ugu bilow Koodhka Mac-ka ee Terminal-ka
Dariiqo kale ayaa noqon karta in la isticmaalo Terminal. Xagee ka shaqeeyaa shaqadan? Hagaag waan tagnaa Finder> Codsiyada> Adeegyada. Mar alla markii la furo "Terminal" - dabcan, sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa Iftiiminta raadintooda - waa inaad qortaa waxyaabaha soo socda:
Taas ka dib waa inaad ku dhufataa furaha "Gali" oo aad xirataa terminaalka. Howsha dib ayaa loo bilaabay. Oo ay la socoto, dhibaatadii ayaa la xaliyay. Haddii labadan tallaabo ay xallin waayaan, haa, way fiicnaan lahayd in dib loo bilaabo Mac-ga si loo eego haddii dhibaatada la xaliyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida dib loogulaabo boodhadhka Mac-gaaga
Waad ku mahadsan tahay inay si sax ah iigu shaqeysay aniga oo ka sameeynaya terminaalka waxaan la socdaa MacBook oo leh mashiinka M1 waxaan rajeynayaa in qof uu sidoo kale u arko inuu faa'iido leeyahay
Jawaab Hector Ulises
Apple waxay sii deyn kartaa dhagaha dhagaha ee sanadkaan
Huawei wuxuu bilaabay tartan u ah Apple's MacBook, Huawei MateBook X Pro